Tao Anaty Blaogy Palestinianina Tamin’ity Herinandro ity: Palestina Ankehitriny. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2018 14:43 GMT
Tamin'ny alalan'ny The Black Iris, nanao blaogy momba ireo vaovao faran'ilay horonantsary Palestinianina sambany hatrizay voasafidy ho amin'ny Oscar i Naseem Tarawnah raha vao nahazo ny Golden Globe: Paradise Now. Navoakan'i Naseem ny lahatsoratra momba ireo vondrona Israelianina mpandresy lahatra izay mandà ny famaritana ilay horonantsary ho Palestinianina. Nisy rojom-panehoankevitra mahaliana nirangaranga ihany koa.
Momba io fotokevitra io ihany, manoratra ary mamaly ireo fiampangàna Israelianina sasany, sy ireo fanamelohan'ny manampahefana Palestinianina izay mbola tsy manambara ny fiforonana ara-dalànan'i Palestina i Haitham Sabbah.
Ireo vaovao avy amin'ny tontolon'ny Blaogy.
Arak'i Beit-Sahour, niteny i Sami Abu-Zuhri, iray amin'ireo mpitarika ny Hamas, fa andrasana ny tokony hanaovana ny fifampiresahan'i Hamas sy Rosia amin'ny faran'ity volana ity.
Avy any amin'i Raising Yousuf:
Herintaona amin'ity herinandro ity, maty voatifitry ny Israelianina mpitily i Noran Lyad Deeb, 10 taona, raha nihira ny hiram-pirenena ary nitehaka tao amin'ny sekoliny misy ny sainan'ny Firenena Mikambana tany Rafah.
Fahatsiarovana iray ho an'i Noran, napetrak'ireo mpiara-mianatra aminy tamin'ny herintaona. Loharanon'ny sary : Raising Yousuf
Arak'i Beit-Sahour, efatra no voasambotra ary nentin'ireo miaramila Israelianina tany amin'ny toerana tsy fantatra, any amin'ny toeram-pisavàna maharitra sy vavahady izay any amin'ny fidirana avy any andrefan'i Al Fawwar, Al-Khalil (Hebrona). Ao amin'ny vohitr'i Beit Awwa, andrefan'i Al-Khali, anjatony no notànana ary zazakely 5 no naratran'ireo miaramila Israelianina tao Doura sy Bani Neim.
Nifidy ny fanomezany ny anjarany ho 2,2 tapitrisa £ (Livra) avy amin’ilay mpanamboatra bildaozera Carterpillar ny fiangonan'i Angletera, hoy I Ohoud avy ao amin’ny Arabesque Rhabsody momba ireo vaovao hoe lasa lehibe ary manambara mazava tsara fa Caterkillar i Caterpillar.
Izao no resahantsika…
Mandefa blaogy momba ny tatitra nataon’ny mpanao gazety Israelianina, Amira Hass, i FADI avy ao amin’ny KABOBfest, izay ilazany fa efa vitan’ny Israelianina ny fanapahana ny faritra Atsinanan’i Cisjordanie avy amin'izay sisa taminy nandritra ny ‘fisintahan'ny tafika’ avy any amin'ny Lemak'i Gaza. Efa ho ampahatelon’ny faritra manontolo io ampahany io.
Tezitra tamin’ny fiarahamiasan’ny Amerikanina sy ny Israelianina vokatry ny fanamboarana ny “Tranombakoky ny Fandeferana” teo ambonin’ny toeran'ny fasana Miozolomanina fahiny ao Al-Quds (Jerosalema) i Shaden avy ao amin’ny Sugar Cubes sy i Dave avy ao amin’ny davereed.org.
Manoratra momba ny tatitra tsy tomponandraikitra nataon'i CNN i umkahlil. Lazainy fa nitatitra i Mark Lavie avy ao amin’ny AP hoe maherin’ny valonjato ireo gadra Palestinianina no:
“voangoly” tao amin’ny fonja tao Ketziot noho ny nijeren'izy ireo CNN, televiziona Jordanianina ary televiziona Israelianina sasany.
Napetraka ny politikan’ny fonja ao Ketziot mba hahazoana antoka fa “tsy hamorona korontana sy hanomana fampihorohoroana avy ao anaty fonja” ireo gadra.
Miteny i Haitham fa nanapaka hevitra ny hijirika ny Google ny Masoivohom-Baovao ao Israely mba hisorohana ny:
Pejy aterineto (araka ny filazan’izy ireo) ho an’ny vondrona mpampihorohoro Islamika hanatratra ny toerana ambony ao amin’ny Google ho toy ny ampahany amin’ny fifaninanana SEO (Search Engine Optimization).
Lasa adala ny sionista iray, Lee Kaplan, avy amin’ny KABOBfest, ka nandefa pejy aterineto iray mba:
launch his oft-fabricated accounts of PSM events and activists… handefasana ireo fitantarany, matetika foronina, ny hetsika PSM sy ireo mpikatroka.
Ireo zavatra kely manandanja.
Avy ao amin’ny blaogin’i Sabbah, izay nanomboka tamin’ny 1 Martsa ny pejy aterineto iray vaovao antsoina hoe FriendWise dia handahatra blaogy ao Palestina. Tranonkala iray itambaran'ireo tambajotranà vondrom-piarahamonina ny FriendWise izay mikendry ny hipetrahany ho lohan’ireo pejy aterineto hafa vaovao izay ho avy toy ny myspace.com.